Dendrology: ihe ọ bụ, njirimara, mkpa na ọmụmụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Sayensị na-agba mbọ ịmụ ihe niile na-eme n’ụwa anyị a ugbu a na ihe ndị mere n’oge gara aga na ịkọ ọdịnihu. Otu n’ime ngalaba sayensị nke na-agụ osisi bụ Dendrology. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ na-enyocha osisi na uto ha, na-eweta mgbanaka.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Dendrology, njirimara ya na mkpa ya.
1 Kedu ihe bụ Dendrology
2 Dendrology etinyere na ihu igwe
3 Mgbanwe ihu igwe na mgbanaka osisi
Kedu ihe bụ Dendrology
Anyị na-ekwu maka okwu a bụ "Dendron" na "Logos", sitere na Greek, nke pụtara osisi na ọmụmụ n’otu n’otu. Emepụtara okwu a na 1668 site n'aka Ulisse Aldrovandi (onye isi okike nke Italiantali nke malitere Botanical Garden nke Bologna) site na mbipụta nke Dendrology. Ka osisi na-eto, ọ na - ewepụta mgbaaka ọhụụ. A na-eji mgbaaka ndị a amata afọ nke uto, afọ, nghazi, wdg. Ya mere, ọ bụrụ na anyị mụọ nke ọma na osisi ahụ na-ada ụda nke ọma, anyị ga-ama nke ọma ihe mere n’oge gara aga.
Ekele maka Dendrology, a pụrụ ịmụ usoro mbara ala site na mgbanaka osisi. Geology nke ala na-agbanwe ka oge na-aga emeela ndị na-ahụ maka ọdịdị ụwa. Mmiri na ifufe, mmiri ozuzo, wdg. Ha bụ ndị ọrụ dị iche iche nke ọdịdị ala nke na-eme ihe site na ịme ngosipụta ọdịdị ala. A na-agbanwe ihe ndị dị na mbara igwe dị ka nkume na usoro ha n'oge oge. N'ihi mgbanaka uto nke osisi na ịmụ banyere ha, enwere ike ịmata ihe mere n'oge gara aga. Mụ usoro nhazi ala site na mgbanaka osisi bụ alaka nke Dendrology nke a maara dị ka Dendrogeomorphology.
Ọ bụ ezigbo ụzọ isi nweta data maka mpaghara, obodo mepere emepe, akụrụngwa ma ọ bụ ọmụmụ nchịkwa okike. Anyi aghaghi imata na ụdị omume niile nke mmadụ ọ dị mkpa ịmata ebe anyị nọ na mmalite ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, maka mmepe na obodo ndị mepere emepe ma ọ bụ ihe nrụpụta, ọ nwere ike ịmasị ịmara mgbanwe nke ebe a ga-ewu ya. Otu ihe a na - eme na ahihia umu anumanu na umu anumanu di otu ebe a. Ntọala nke ọmụmụ niile dị mkpa iji nwee ike ịme ụlọ ahụ dịka iwu si dị bụ ihe amara dị ka nyocha mmetụta gburugburu ebe obibi. Dendrology nwere ezigbo ebe n'ọmụmụ ihe metụtara gburugburu ebe a.
Dendrology etinyere na ihu igwe
Anyị maara na a na-enweta ozi banyere mgbanwe nke jioloji nke mbara ala ọ bụghị naanị site na mgbanaka osisi ahụ, kamakwa na ihu igwe. Ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile maara na site n'ịgụ mgbanaka osisi anyị nwere ike ịmata afọ ha, eziokwu bụ na ọ zighi ezi. Osisi ọ bụla nwere ụdị uto dị iche karịa ndị ọzọ ma dabere n'ụdị ọ bụla. Ọ bụghị osisi niile na-etolite otu yiri mgbaaka na-eto n'otu ụzọ. N'ihi nke a, nhazi nke mgbaaka ndị a nwekwara ike inye anyị ozi gbasara ihu igwe na-agbasokarị n'oge oge osisi ahụ akọwapụtara.
Ihe yiri mgbaaka ndị gbara ọchịchịrị n'oge oge oyi. Ọ bụ osisi dị mkpụmkpụ ma dịkwa nkenke nke na-eje ozi n'osisi ahụ iji nwee ike ichebe onwe ya pụọ ​​na okpomọkụ dị ala. Osisi aghaghi idi ndu onodu ojoo gburugburu ma udu mmiri ma udu mmiri. Ndị a na-abụkarị oge abụọ nke afọ nke ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị oke njọ ma, ya mere, ọ dị ha mkpa ịmepụta usoro nke mgbanwe nchekwa.
Otu n’ime ha bụ osisi ndị ka sie ike nke na-egosi na mgbaaka ndị gbara ọchịchịrị. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta mgbaaka ndị na-acha ọkụ ọkụ n'oge ọkọchị na obere osisi na-enweghị ntụpọ na mgbanaka ndị gbara ọchịchịrị na osisi ndị ọzọ. Ihe yiri mgbaaka ndị doro anya sara mbara, ebe ọ bụ na osisi ahụ na-enwe ezigbo okpomọkụ na nri. N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ọrụ osisi dị elu karịa Na-enye gị ohere ịgbasa mgbaaka ndị ahụ ogologo.
N'oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọta mgbaaka doro anya nke dị warara. Nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ụkọ mmiri akụkọ ihe mere eme. N'enweghị mmiri, osisi ahụ apụghị itolite. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ na mgbanaka uto ahụ dị warara mana ọ ka doro anya. Nke a anaghị ekpughe ụdị ozi dị iche iche. N'aka nke aka, eziokwu ahụ na mgbanaka ahụ doro anya anaghị ekpughe na enwere okpomọkụ dị elu na-aga n'ihu. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ na site na ịghara ito na warara ma e jiri ya tụnyere mgbaaka ndị ọzọ sara mbara, ọ na-egosi na osisi ahụ enwetụbeghị nri ndị na-edozi ahụ.
Ọ bụ otu ọnụnọ nke warara ma ọ bụ nke sara mbara karị na-egosi ọnụọgụ nri ndị dị na ọkara. Ọ bụrụ na anyị nwere osisi nwere oke gbara ọchịchịrị yiri mgbaaka ha na-egosipụta ogologo ma siri ike winters. N'aka nke ọzọ, a na-enyochakwa mgbaaka ndị doro anya maka obosara ha. N’ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na udu mmiri adị ogologo ma ọ bụ pere mpe ma ọ bụrụ na ha nwere okpomoku dị elu ma-ọbụ dị ala.
Mgbanwe ihu igwe na mgbanaka osisi
Ọ bụghị naanị na-amụ site na mmụba nke ikuku gas na mgbanwe nke okpomọkụ na ọkwa ụwa. Enwere ike ịmụ ya site na ndị na-ahụ maka ndụ nke akpọrọ mgbanaka osisi. Dendrology bụ ọrụ maka ịmụ osisi ndị fosil na-enyekwa ozi gbasara ihu igwe nke oge gara aga. N’ọhịa a anyị maara na amaara ya dendroclimatology.
Anyi aghaghi iburu n’uche na imuta ngbanwe onodu ubochi di nkpa maka oru nke ihe ndi ozo ma ta’a ma odi n’iru. Anyị enweghị ike ịhazi atụmatụ ọrụ akụ na ụba anyị n'ọdịnihu dabere na ọmụmụ nke ugbu a. Ọ dị mkpa ịmata mgbanwe dịgasị iche iche nke ihu igwe nwere n’akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Enwere ike ịmata mmụba ndị a nke ọma site na Dendrology. Osisi yiri mgbaaka nwere ike igosipụta ọtụtụ ozi ọ bụghị naanị gbasara okpomọkụ na uto osisi, kamakwa banyere mgbanwe nke okpomọkụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Dendrology, mkpa ya na ozi ọ nwere ike ikpughere anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Dendrology